संसदमा पुष्पकमल दाहालको कडा प्रस्तुती : प्रधानमन्त्री ओलीलाई दर्जन प्रश्न - Dainik Online Dainik Online
संसदमा पुष्पकमल दाहालको कडा प्रस्तुती : प्रधानमन्त्री ओलीलाई दर्जन प्रश्न
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं ससदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता भंग हुनु र मुलुक राजनीतिक अस्थिरता तर्फ उन्मुख हुनुको मुख्य कारक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको दाबी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावको बारेमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले सरकार गठन भएदेखिका सम्पुर्ण कार्य समिक्षा गर्दा अहिलेको अवस्था श्रृजना हुनुमा प्रधानमन्त्री ओली नै मुख्य जिम्मेबार रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीलाई फेरि सदनमा आएर विश्वासको मत माग्ने कुनै अधिकार नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
संसद पुर्नस्थापना भएकै दिन आफुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनमा दिएर नया सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएको स्मरण गर्दे उहाँले विश्वासको मत माग्नु भन्दा राजीनामा दिनु नै लोकतान्त्रिक हुने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यो सदनले उहाँलाई व्श्विासको मत दिदैन । यो प्रधानमन्त्रीले राम्रोसंग बुझ्नुभएको छ । बुझ्दा बुझ्दै पनि मत माग्नुभएको छ । तपाईले अहिले पनि राजीनामा दिएर नया सरकार गठनको बाटो प्रशस्त गरिदिनु नै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता संविधानको मर्म भावना अनुकुल हुन्छ भनेर म तपाईलाई सुझाव राख्न चाहन्छु ।
संविधानलाई कोरोना लाग्यो
उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यन्वयन गर्नु भन्दा त्यसलाई आक्रमण गर्ने काम गरेको भन्दै अहिले संविधान आईसीयुमा पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “संविधान पनि बडो नराम्रो संग चिथोरिएको, कोपरिएको, संविधानलाई नै कोरोना लागेजस्ता । समाज त कोरोनाले आक्रामक छदैछ । खासगरी सरकारका गतिविधिले संविधानलाई पनि कोरोना लागेजस्तो । आईसीयुमा राखेको जस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रीनु परेको छ । ”
आलोपालो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको सहमति ओलीले तोडे
अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय समस्याको मुल कारक नै प्रधानमन्त्री ओली रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले पार्टी एकताको समयमा भएका सहमति सम्झौताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उलंघन गरि दंभ र अहंकार सहित संविधान मिच्ने काम गरि संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, कम्युनिष्ट एकता लगायतमा प्रहार गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । बामगठबन्धन र कम्युनिष्ट एकतासंगै राजनीतिक स्थायीत्व, विकास र सम्मृद्धिको एजेण्डालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवाती दिन देखि नै तुहाउने काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “संविधानमा संकट, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समस्या, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा संकट, एकताको महान र असाधारण पहल कदमीमा संकट मुख्य रुपमा कसको कारणले आयो प्रधानमन्त्री जी ? के तपाई छातीमा हात राखेर आत्मसमिक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ ? तपाईले कहिलेकाहीँ बोलेको सुन्छु म प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्या नै भयो भनेर । म हो राष्ट्रिय समस्या कि तपाई हो राष्ट्रिय समस्या ? बहस गरौ । मैले संविधान बनाउने र तपाईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुमा म राष्ट्रिय समस्या भएर हो ? वाम गठबन्धन र कम्युनिष्ट एकताको प्रस्ताव लिएर तपाईलाई फेरि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने म राष्ट्रिय समस्या भएर हो ? मैले तपाईसंग पार्टी भित्र वहस गर्दा कहिले, तपाईका कुन कार्यक्रमलाई मैले व्यवधान गरेँ ठोस रुपमा जवाफ दिन सक्नुहुन्छ ? तपाईसंग जवाफ छैन ।
तथ्य छैन । तपाईसंग आधिकारिक र प्रमाणिक तर्क पनि छैन । बरु यसको निम्ति तपाई नै जिम्मेबार हो । तपाईले बामगठबन्धन र कम्युनिष्ट एकताको पछाडिको राजनीतिक स्थायीत्व, विकास र सम्मृद्धिको हाम्रो सपनालाई डे वान देखि नै तुहाउने तिर लाग्नुभयो भन्ने मेरो आरोप छ तपाईमाथि । ”
अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकताको समयमा भएको आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तोडेको खुलासा गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हिजो हामीले गरेको सहमति समझदारी मैले तोडेको हो र प्रधानमन्त्री जी ? पालोपालो प्रधानमन्त्री । पालोपालो अध्यक्षको सहमति मैले तोडेँ ? त्यसो गरेको भए आज यो देश कहाँ हुन्थ्यो ? ”
अध्यक्ष दाहालले पार्टीको आन्तरिक वहस र विवादलाई अघि सारेर संगो देश र जनतालाई आक्रान्त हुने गरि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको बताउनुभयो । आफैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफै फेरि सदनमा उभिएर विश्वासको मत माग्ने कुरा अस्वभाविक भएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई मत माग्ने अधिकार नै नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रश्न गर्नुभयो “तपाईलाई विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र ?”
अध्यक्ष दाहालले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि संसदमा विश्वासको मत लिन आउँदा प्रधानमन्त्रीको नियतमा शंका उब्जिएको बताउनुभयो । उहाँले फेरि संसद विघटनको बाटो बनाउनका लागि विश्वासको मत लिने काम गर्नुभएको त होइन भनी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिने काम नाटकीय लागेको टिप्पणी गर्नुभयो । नियमित अधिवेशन बस्नुपर्ने बेलामा विशेष अधिवेशन बोलाउँदा प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई छल्न खोजेको आशंका उब्जिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनस्थापना पछि पनि फेरि विघटन गर्न सक्ने डरले समर्थन फिर्ता नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारमा बसेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमा दंभ, अहंकार बढेको र त्यही दंभ र अंहकारले मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । दोश्रो लहर सुरु हुन लागिसकेको बेला प्रधानमन्त्रीले रथयात्रा, सभा र ठूला ठूला जुलुश लिएर हिडेको उल्लेख गर्दै संक्रमण बढाउने कामको अरुलाई दोषारोपण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री ओली बाहेक सबैलाई विश्वासको मतको विपक्षीमा भोट हाल्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो “ आज पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरेको सही गरेँ भन्ने लागिरहेको छ । मौका पाएपछि फेरि विघटन गर्छुु भन्ने देख्छु म । आज तपाईले विश्वासको मत लिनु थियो भने हिजो तपाईले अध्यादेश मार्फत संबैधानिक परिषद्को बैठक किन गर्नु परेको थियो ? तपाईलाई भरोसा छैन । विश्वासको मत त मैले पाउने होइन त्यसैले कब्जा गर्न सक्ने ठाउँहरु कब्जा गरिहालुँ भन्ने मनसायले काम गर्नुभयो ।”